Apps अनुप्रयोगहरू उडान द्वारा उत्पन्न तनावसँग लड्न यात्रा समाचार
उडानको तनावसँग लड्न apps अनुप्रयोगहरू
मरियम | | सामान्य, यात्रा
हामी सबै यात्रा गर्न मन पराउछौं तर धेरै व्यक्तिको लागि एउटा प्लेन लिनु नै वास्तविक समस्या बन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईसीएओ) का अनुसार, छ जना यात्रु मध्ये एक जना उडानबाट डराउँछन्, यद्यपि यो अवस्थित यातायातको सुरक्षित साधन हो भन्ने तथ्यलाई बावजुद।
धेरै व्यक्तिहरूको लागि, हवाईजहाजबाट यात्रा कहिलेकाँही अपरिहार्य हुन्छ किनकि उनीहरूले कामका कारणका लागि वा केवल छुट्टीहरूको लागि यसो गर्नुपर्दछ। यस कारणका लागि, सबै आवश्यक मद्दत खोजेर र सकेसम्म छिटो समस्या समाधान गरेर यस फोबियासँग लड्न धेरै महत्त्वपूर्ण छ।
फेरि, नयाँ प्रविधिहरू हाम्रो पक्षमा खेल्छन् किनकि हालसालैका मोबाइल अनुप्रयोगहरू देखा परेका छन जुन हामीलाई ध्यानमार्फत थप आरामदायी विमान लिन मद्दत गर्ने वाचा गर्दछ।
दिनको -5-१० मिनेट लिई आफ्नो दिमाग खाली गर्न, सास फेर्नुहोस्, र आफैलाई चिन्न यो डरलाई जित्नको लागि उत्तम तरिका हो। निम्न अनुप्रयोगहरू पनि ठूलो प्रयोगको हुन सक्छन्। यी केहि राम्रा हुन्।
1 माइंडफुलनेस अनुप्रयोग
4 OMG म ध्यान गर्न सक्छु!
5 Breathe2 आराम
6 सपना बुनाई
स्पेनिशमा स्मार्टफोनका लागि यो अनुप्रयोगले सहज र व्यावहारिक प्रक्रियाको साथ तनाव कम गर्न मद्दत गर्दछ। वैज्ञानिक अनुसन्धानले देखाउँदछ कि यसले दिनको २० मिनेट नियमित अभ्यासको साथ कल्याणकारी बनाउँछ।
यो अनुप्रयोगले हामीलाई एक सन्देशका साथ सम्झाउँछ कि यो ध्यान गर्ने समय हो यदि हामीले चाहिएको मितिहरूमा अनुस्मारकहरू सेट गर्‍यौं। यी ध्यानहरू डिजाईन गरेर प्रदर्शन गर्न सकिन्छ जुन हामी चाहन्छौं बसाई नहुन्जेलसम्म।
यो धेरै देशहरुमा बिक्री मा नम्बर एक भएको छ र दुबै शुरुवातकर्ता र विज्ञहरु लाई सिफारिस गरिन्छ। यसको मूल्य € १.1,99। छ र आईट्यून्समा उपलब्ध छ।
यस अनुप्रयोगले हामीलाई आरामदायक छविहरू र ध्वनिहरू (वर्षा, बतास, छालहरू, बर्ड्सong्ग, आदि) मार्फत ध्यान दिन र अनुकूलित कार्यक्रमहरूको साथ दैनिक जीवनमा शान्त र शान्ति ल्याउन अनुमति दिन्छ।
यसको उपलब्ध कार्यक्रमहरूको साथ, लाखौं मानिसहरूले आफ्नो तनावको स्तर कम गर्न र राम्रो निद्रामा व्यवस्थित गरेको छ, जसले कल्याणको ठूलो भावनामा परिणाम दिन्छ।
शान्त, हामीलाई ध्यान गर्न मद्दतको साथ साथै, आपतकालिन परिस्थितिहरूमा आराम गर्न पनि सिकाउँछ (जस्तै उडानको डरमा) वा विशिष्ट 7-दिनको कार्यक्रमको साथ निदाउन।
यो अनुप्रयोग हालै अ English्ग्रेजीमा मात्र उपलब्ध छ र हामी यसलाई दुबै आइट्यून्स र गुगल प्लेमा फेला पार्न सक्छौं। योसँग केही नि: शुल्क प्रकार्य छ तर सत्र प्रोग्रामहरू भुक्तान गरिन्छ। जे होस्, तिनीहरू यसको लागि लायक छन्।
यो एक धेरै रोचक मोबाइल अनुप्रयोग हो जसले हामीलाई यसको सहज ज्ञानपत्रको साथ हाम्रो जीवनस्तर सुधार गर्न मद्दत गर्दछ। परिस्थितिको रूलेटको माध्यमबाट हामी आफैंलाई शान्त पार्न के गर्न चाहन्छौं भनेर चयन गर्न सक्दछौं: म सुत्न सक्दिन, म तनावमा छु, कामबाट छुट्टिनु, पर्खनु वा यात्रा गर्नु यी मध्ये केही मात्र हुन्।
यो धेरै व्यावहारिक छ कि तनाव को सामना गर्न को लागी केहि मानिसहरु को लागी पैदा हुन्छ। प्रयोगकर्ताहरूले सबै प्रकारका सत्रहरू छनौट गर्न सक्दछन् जुन यात्राले यात्रा गर्दछ: एयरपोर्टमा पर्खदै, यात्रा गर्दै, छुट्टिको पछि ...
बौद्धिफाइ आईट्यून्स र गुगल प्लेमा अंग्रेजीमा उपलब्ध छ। यसको प्रयोगको लागि सदस्यता शुल्क चाहिन्छ जुन सदस्यता अवधिमा निर्भर गर्दछ, साताको35. from० देखि fee an० को वार्षिक शुल्क सम्म।
OMG म ध्यान गर्न सक्छु!
OMG म मध्यस्थता गर्न सक्दछु! यो कसरी ध्यान गर्ने सिक्ने सब भन्दा सजिलो तरीका हो। यसको मानसिकता कार्यक्रम र यसको ध्यान प्रविधिको धन्यवाद हामी उडानको डरले गर्दा भएको तनाव र चिन्ताबाट छुटकारा पाउन सक्छौं। यसैले, हामी हाम्रो जीवनमा अधिक खुशी र स्वास्थ्य ल्याउन सक्षम हुनेछौं।
यस अनुप्रयोगले अनिद्रा र अन्य निद्रा विकारहरूसँग पनि लड्छ र दिनमा १० मिनेटमा एकाग्रता सुधार गर्न मद्दत गर्दछ।
यो तपाईंको स्मार्टफोन, ट्याब्लेट वा कम्प्युटरमा प्रयोग गर्न सकिन्छ र नि: शुल्क हो। यो दुबै गुगल प्ले र आईट्यून्समा उपलब्ध छ।
आईट्यून्स र गुगल प्लेमा उपलब्ध यो अनुप्रयोगले तनाव र स्वतन्त्रतामा शान्ति महसुस गर्न भिडियो प्रदर्शनको साथ सास फेर्ने व्यायामको एक श्रृंखला प्रदान गर्दछ।
ब्रेथे २ रिलक्सले हामीले प्रशिक्षणको अघि र पछिको तनावको डिग्रीलाई पहिचान गर्न एउटा परीक्षण प्रस्ताव गर्छ। हामीले यस अनुप्रयोग र यसका आरामदायक संगीतमा भेट्टाउने इनहेलेसन र उच्छ्वास प्रविधिहरूको लागि धन्यवाद, हामी हाम्रो दिमाग र हवाईजहाजको पर्खाइमा र विमान लैजानको डर जस्ता केही परिस्थितिहरूले उत्पन्न चिन्तालाई नियन्त्रण गर्नेछौं।
यो ध्यान अनुप्रयोग6बर्ष भन्दा माथिका बच्चाहरुका लागि सिफारिस गरीन्छ र पूर्ण नि: शुल्क हो।
वैकल्पिक आयुर्वेद मेडिसिनका प्रसिद्ध गुरु र ओप्राह विनफ्रे वा डेमी मूर, दीप्रा चोपडा जस्ता प्रसिद्ध व्यक्तिको आध्यात्मिक मार्गनिर्देशनले हामीलाई शान्त र खुशीको स्थितिमा पुर्‍याउन यो अनुप्रयोग सिर्जना गरेको हो। स्मार्टफोनको एलईडी फ्ल्यास प्रयोग गरीरहेको छ, आराम र धुनहरू।
यो गुगल प्ले र आईट्यून्समा उपलब्ध छ तर यो एपिलेप्टिक्स, गर्भवती महिला वा न्यूरोलॉजिकल डिसअर्डर भएका व्यक्तिहरूको लागि सिफारिस गरिदैन।
हामी आशा गर्दछौं कि यी स्मार्टफोन अनुप्रयोगहरूले तपाईंलाई तनावबाट स्वतन्त्र गर्न मद्दत गर्दछ र आत्मविश्वास र स्वास्थ्य प्राप्त गर्दछ यदि तपाईं ती यात्रीहरूमध्ये हुनुहुन्छ जो एक विमान लिनको लागि धेरै तनावका छन्। यदि तपाईंले पहिले नै प्रयास गर्नुभएको छ भने, तपाईंको अनुभव के छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » सामान्य » उडानको तनावसँग लड्न apps अनुप्रयोगहरू
Andalusian प्रान्त (I) प्रति एक महल